News - Page - 27
नेपाली चलचित्र एकपछि अर्को गर्दै लगातार रुपमा असफल भइरहेका छन् । निर्माताको लगानी माटोमा मिलिरहेको छ । चलचित्र क्षेत्रले हप्तैपिच्छे करोडौं डुबाइरहेको छ । चलचित्र क्षेत्रमा बेतिथि र बेमेलको पराकाष्टा नै छ ।
भट्टराईले यस क्षेत्रका कुनै पनि संघसंस्थामाथि आफ्नो हस्तक्षेप नरहने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
चलचित्र ‘यात्रा’को ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्रको रुपमा हेरिएको ‘यात्राः अ म्युजिकल भ्लग’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजीत एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।
चलचित्र ‘यात्रा’ को कलेज तार्गेट प्रमोशन शुरु भएको छ । आइतबार चलचित्रको प्रमोशनका लागि कलाकारहरु हातिवनमा रहेको लिटल एन्जल्स कलेजमा पुगेका छन् ।
अभिनेता प्रदीप खड्का र निर्माता गोविन्द शाहीले ४५ जना अनाथ बालिबालिकाको पढाईमा सहयोग गरेका छन् ।
आज सम्म प्रदिपका ५ चलचित्र प्रदर्शनमा आए । जसमध्ये ४ वटा असफल र एउटा मात्र सफल भयो । प्रतिशतकै आधारमा भन्ने हो भने ८० प्रतिशत चलचित्रले लगानी समेत उठाउन सकेनन् ।
चलचित्र अघिल्ला सिरिज जस्तै प्रेम र गीतकै लभ स्टोरीमा निर्माण हुनेछ । यद्यपी यो चलचित्रले बाइसे – चौबिसे राज्य छँदा खेरीको लभस्टोरी भन्ने छ ।
चलचित्र क्षेत्रमा बिशिष्टता हासिल गरिसकेकोले अब भविष्यमा कुनै विषयमा बिशिष्टता हासिल गर्ने योजना भने नरहेको करिश्माको भनाई छ । यद्यपी गर्नै परे त्यसका लागि समेत ...
रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा ‘कागजपत्र’को प्रिमियर
रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा बिहिबार साँझ राजधानीमा भएको प्रिमियर शोमा चलचित्रकर्मी र पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा केशब भट्टराई नियुक्त, यस्तो छ नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टराईको जीवनी
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा निर्माता तथा कलाकार केशव भट्टराई नियुक्त भएका छन् ।
चलचित्र नीति कहाँ पुग्यो ? प्रधानमन्त्री भन्छन् समय छैन !
सरकारले किन चलचित्र नीतिलाई वेवास्ता गरिरहेको छ । हामीले यसको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग खोज्ने प्रयास गरेका थियौं ।
टाइप कास्ट बन्न मन छैन, तराईको कथा भन्न मन छ – नाजिर हुसेन, कलाकार
एक हिसाबले भन्ने हो भने नाजिर टाइप काष्ट जस्तो बने ।
हरिहरले गरे आफ्नै भविष्यवाणी, शुक्र ग्रह शुरु भएकोले चलचित्रमा राम्रो हुने
हरिहरका अनुसार चैत्र १५ गते शुक्रबार नवमी तिथी, डेट राम्रो छ । त्यसोभए चलचित्र पनि राम्रो चल्छ होला ?
होली खेल्दै ‘कागजपत्र’को गीत सार्वजनिक
चलचित्र ‘कागजपत्र’को दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच ‘तिमी जाने बाटो’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
आफ्नै हिरोइनसँग सलिनले मनाए होली (फोटो फिचर)
आफ्नै साथीभाई माझ होली मनाउँदै आएका सलिनले पहिलो पटक मिडिया र दर्शकहरुमाझ होली मनाउन लागेका हुन । आफुलाई होली पर्व मन पर्ने बताएका सलिन दर्शकसँग सेलिब्रेट गर्न निकै उत्साहित देखिएका छन् ।
पम्फा भुसाललाई मन पर्यो चलचित्र ‘जानी नजानी’
नेत्री पम्फा भुषालले चलचित्र ‘जानी नजानी’ हेरेकी छिन । नेकपाकै केहि सदस्य सहित उनी हलमा पुगेर चलचित्र हेरेकी हुन ।
‘लभ स्टेशन’को गीत ‘मेरो आँगनी’मा सार्वजनिक
चलचित्र ‘लभ स्टेशन’को गीत सार्वजनिक गरिएको छ । सोमबार ‘मेरो आँगनी’मा बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
सामाजिक हैन मनोरञ्जनात्मक ‘कागजपत्र’ – अपिल विष्ट, निर्देशक
चलचित्र झुम्कि न त पूर्ण सामाजिक बन्यो न त मनोरञ्जनात्मक अपिल भने – ‘त्यही चलचित्रबाट पाठ सिकेर कागजपत्र बनाइएको हो ।’ सामाजिक कथाका चलचित्र बनाउन मन पराउने अपिलले टिमको सल्लाह बमोजिम झुम्किमा मनोरञ्जनका लागि एउटा क्यारक्टरलाई कमेडी शैलीमा ढालेका पनि थिए ।
जन्मदिनको अवसर पारी निर्माता गिरीद्वारा एम्बुलेन्स सहयोग
समाजिक कार्यमा संलग्न रही आएका निर्माता गिरी अब देखि यही फाउण्डेसन मार्फत समाजिक कार्यलाई अघि बढाउने समेत जनाएका छन् ।
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को दोस्रो सिजन हिमालय टिभीमा
गत वर्ष सम्पन्न पहिलो सिजन कान्तिपुर टिभी र डिसहोम रमाइलो टिभीबाट प्रसारण गरेको एनसी मिडियाले यसपटक भने हिमालय...
भदौ २७ मा ‘नीरफूल’
पत्रकार फुलमान वलको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘नीरफूल’को प्रदर्शन मिति तय गरिएको छ । आगामी वर्ष भदौ २७ गतेका लागि चलचित्रको प्रदर्शन मिति तय गरिएको हो
ज्योतिषी हरिहर अधिकारीको लभ, रोमान्स र द्वन्द्व (फोटो फिचर)
ज्योतिषी हरिहर अधिकारीले अभिनय गरेको चलचित्र ‘शुभलभ’ चैत्र १५ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । आफ्नो वास्तविक जीवनको पेशासँग मिल्दो भएकोले चलचित्रमा अभिनय गर्न राजि भएको बताउँने हरिहरले रिलमा भने ज्योतिषी मात्र होइन लभ, रोमान्स र द्वन्द्वसमेत गरेका छन् ।
चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’को गीत सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजीत कार्यक्रमका बिच ‘माया पिरीम’ बोलको गीत...
‘ए मेरो हजुर ३’को पहिलो गीत सार्वजनिक
चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रबार भिडियो साझेदारी सञ्जाल युट्युब मार्फत ‘जीन्दगी नै भन्दिन’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘दाल भात तरकारी’को शिर्ष गीत सार्वजनिक
‘दाल भात तरकारी’को शिर्ष गीत सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका विच गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
Results 1750: You are at page 27 of 35